Njani ukuba unyothule Android kunye Root Master ngaphandle PC | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Ingcambu Android, Ukukopela kwe-Android, Tutorials
Nangona inkqubo yokusebenza ye-Android isinika inkululeko eyaneleyo yokwenza yonke into, sinokuhlala sifumana ezinye izithintelo. Le mida ingasuswa ukuba sifumana ukufikelela kubasebenzisi abakhulu okanye, njengoko isaziwa ngcono kwi-Android, iNgcambu. Kodwa, Indlela ukuba unyothule Android?
Uninzi lwezixhobo ezisinika ithuba lokuncothula izixhobo zethu ze-Android zePC, kodwa kukwakho nezicelo eziza kusivumela ukuba sifikelele Ingcambu kwi-smartphone yethu okanye ithebhulethi.
Kule nqaku siza kuzama ukucacisa inxenye yento enxulumene nokuba yingcambu kwaye Ingcambu Android. Siza kucacisa kancinane ngentla ukuba yingcambu eyiphi kwaye siza kuthetha ngezicelo ezithile ukuqalisa izixhobo zethu, zombini malunga nezixhobo ezisinyanzela ukuba sisebenzise i-PC, njenge-Root Master, kunye nezinye eziya kusivumela ukuba senze lo msebenzi ngaphandle yiyo.
1 Yintoni ukusetyenziswa kokuba yingcambu yomsebenzisi kwi-Android?
2 Eyonaapps ilungileyo yengcambu kwi-Android
3 Njani ukuba unyothule Android kunye Ingcambu Master
4 Ungazi njani ukuba ndiyingcambu okanye hayi
5 Kuthekani ukuba andiyongcambu
6 Ngaba kuyingozi ukuba unyothule iselfowuni?
7 Ngaba iwaranti isuswe yingcambu?
8 Ndenza ntoni ukuba emva kwengcambu kwi-Android andinakuyihlaziya?
9 Iingcebiso zokugcina engqondweni ngaphambi kokuba uqhubeke
10 Ndiyisusa njani ingcambu
Yintoni ukusetyenziswa kokuba yingcambu yomsebenzisi kwi-Android?
Njengoko benditshilo ngaphambili, nangona kwi-Android sinenkululeko yokwenza nantoni na, sihlala sinemida. Njengenkqubo yokusebenza esekwe kwiLinux, ukwenza ezinye iintshukumo kuya kufuneka ukuba sibe nefayile ye- imvume ekhethekileyo. Umzekelo, isicelo Cerberus esebenza ukulawula isixhobo sethu kude kwimeko yobusela, inokusebenza kuphela xa isixhobo simile. Njengakwimeko yeCerberus, ukuba sifuna ukubanakho ukusebenzisa yonke imisebenzi enokwenzeka, nokuba iyingozi kangakanani, kwisixhobo se-Android, kuya kufuneka siyisiphule neengcambu.
Ukuba yingcambu nathi sinako:
Susa umaleko wobuqu kuhlobo lophawu.
Susa usetyenziso olusele lufakiwe (bloatware).
Ukuphucula isantya senkqubo.
Ngokuqhubeka ulungiselele isixhobo.
Yenza imisebenzi ye-Wi-Fi engafumanekiyo ngaphandle kwengcambu (njengokufumana kwakhona iipaswedi).
Yenza i-backups ebanzi ngakumbi (usebenzisa izixhobo ezinje nge Titanium Backup).
Eyonaapps ilungileyo yengcambu kwi-Android
Kukho ezininzi ze izicelo eziza kusivumela ukuba sincothule isixhobo sethu se-Android, kodwa ndingagxininisa oku kulandelayo.
VRoot. Enye yezona zidumileyo kwaye zisetyenziswa kakhulu yiVRoot. Njengazo zonke ezona zicelo zibalaseleyo zokuQala izixhobo zethu ze-Android, kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kodwa ifumaneka kuphela kwi-PC. Ukongeza, iyasebenza ukwenza indlela ebuyayo kwaye isebenzela phantse naluphi na uguqulelo lwe-Android (ukusuka ku-2.2 ukuya kuguqulelo lwangoku).
Kingo Ingcambu. Oku kusebenza njenge-app yangaphambili, kodwa i-VRoot kuthiwa inezinga eliphezulu lokuphumelela. Isetyenziselwa ukwenza indlela yakho yokubuya (eyaziwa ngokuba yi-unroot) kwaye isebenza ngeefowuni ezininzi ze-Android kunye neetafile.
FramaRoot. Njengesicelo esingadingi ikhompyuter, ayisebenzi kwizixhobo ezininzi okanye iimveliso njengezixhobo zangaphambili, kodwa lukhetho lokujonga. Kwi LONTO Unesithuba esichaza ukuba ungasiphula njani isixhobo se-Android ngeFramaroot.
UKumkani. Esinye isicelo esivumela ukuba sincothule isixhobo sethu se-Android ngaphandle kokuxhomekeka kwi-PC. Kwiwebhusayithi yabo bathi isebenza kwizixhobo ezahlukeneyo ezingama-103.790. Ngaba eyakho iya kuba ngomnye wabo?
Ngokuqinisekileyo ngolunye lweziapps, uya kufunda indlela yokwenza neengcambu iselfowuni okanye ithebhulethi yakho ye-Android. Ukuba uyafuna ingcambu SamsungEziapps ziyahambelana nenkampani yaseKorea ehambayo kunye neetafile.
Njani ukuba unyothule Android kunye Ingcambu Master
Ngaphambi kokuba uqhubeke uchaze Indlela yokuqalisa i-Android nge-Master Master, ndincoma ukuba ufunde iposti Amathandabuzo akhoyo e-Android; Ingcambu okanye ingcambu? Lowo ngumbuzo ukuba ugxa wam uFrancisco wapapasha ngomhla wakhe. Kubonakala kubalulekile kum ukuba ndilumkise ukuba ngokuNgcothula isixhobo se-Android, uphawu lunokwala ukuyilungisa ukuba sifuna ukusebenzisa isiqinisekiso sayo, nangona ingeyona ixhaphakileyo. Kwelinye icala, ngendlela efanayo yokuba sikwazi ukufikelela kuzo zonke izixhobo ezigcina izixhobo zethu, sikwavula umnyango isoftware enobungozi yenza into yakho, okoko nje siyiqhubayo kwaye sikunike imvume yokwenza (into esinokuyenza ngaphandle kokuyazi).
Ukuba sele uyifundile le posi ikhankanyiweyo ngasentla kwaye ucacile malunga nayo, into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba ukusebenzisa i-Root Master kufuneka ube nesixhobo esiphakathi Iinguqulelo ze-Android 1.5 kunye ne-5.x. Kufuneka kuqatshelwe ukuba le ndlela icetyiswa kuphela kwiitheminali ezingenaso isixhobo esithile esizimeleyo. Framaroot u Odin, okwesibini ngeSamsung. Ukuba uhlangabezana neemfuno, la manyathelo ekufuneka elandelwe:
Sikhuphele i-Root Master LONTO.
Ukuba asinayo imvume yokufaka usetyenziso oluvela kwimithombo engaziwayo yenziwe, siyabenza bakwazi.
Sifaka i-Root Master.
Sisebenzisa isicelo. Siza kubona iscreen njengesiqalo sokuqala. Apha akufuneki senze nantoni na, yima nje ukuba ihlole ukuhambelana nesixhobo sethu.
Ukuba isixhobo sethu siyahambelana ne-Root Master, siza kubona esinye iscreen esifana nesikwisikrini apho siza kubona amaqhosha amathathu. Kufuneka sibambe iqhosha elithi «Ingcambu».
Silindele ukuba isicelo sihlalutye isixhobo kwaye kuvela esinye isikrini apho siza kubona igama "Ingcambu".
Sidlale ku "Ingcambu."
Xa inkqubo igqityiwe, konke okuseleyo kukuchukumisa iqhosha elimfusa kwaye siya kuba nesixhobo sethu.
Kodwa enye into elahlekileyo: xa sigqiba ukuQothula izixhobo zethu nge-Root Master, siya kubona isicelo esitsha esinegama leSuperSu. Into embi kukuba kunokwenzeka ukuba esi sicelo siseTshayina. Ukuba ingxaki iyenzeka, kufanelekile ukuya kuGoogle Play kunye nokukhuphela iSuperSu okanye iSuperusuario ngeSpanish.
Olunye ukhetho olufanayo oluvumela thina Ukuqulunqa i-Android ngaphandle kokuxhomekeka kwi-PC yiRoot. Sisicelo sangoku ngakumbi kune-Root Master kwaye unesifundo esichaza ukuba ungayisebenzisa njani kwisithuba sethu NdiRoot, Ingcambu ezininzi iiterminal ze-Android ngaphandle kwesidingo sePC. Ukongeza, njengoko kucacisiwe kweso sithuba, ukwenza uphando kwi-Androidsis yohlobo "indlela yokuyisusa [isixhobo]", ngaphandle kwezicatshulwa kunye nokutshintsha "[isixhobo]" ngesixhobo esifuna ukusiphula, uya kufumana ulwazi Iingcambu ngokukuko nasiphi na isixhobo se-Android. Unokuklikha LONTO kwaye ujonge kwizithuba ezahlukeneyo ebesizenza kule minyaka idlulileyo.
Ngaba sele uyazi ukuba uyingcambu njani kwi-android ngale ndlela okanye ezinye iindlela? Zive ukhululekile ukushiya amava akho kwizimvo.
Ungazi njani ukuba ndiyingcambu okanye hayi
Unokuba namathandabuzo nokuba uyisusile ifowuni yakho ye-Android okanye hayi. Into enokwenzeka ukuba uyithengile ifowuni komnye umntu. Ke ukuba ufuna ukwazi, kukho iindlela ezilula kakhulu zokufumanisa. Eyona ndlela yokujonga kukusebenzisa usetyenziso. Esi sicelo sibizwa ngokuba yi-Root Checker.
Esi sicelo, onokuzikhuphela kwesi sixhobo, lolona khetho lulungileyo lokujonga ukuba uyingcambu okanye hayi. Konke okufuneka ukwenze ukufaka usetyenziso kwifowuni yakho ye-Android. Ngaphakathi kuyo ufumana iqhosha elikuvumela ukuba uhlalutye isixhobo sakho. Ke iya kukuxelela ukuba uyingcambu okanye hayi. Yinto elula ukuyazi, kwaye ithatha ixesha elincinci.
Kuthekani ukuba andiyongcambu
Ukuba asinguye umsebenzisi weengcambu, ithatha ukuba asinakho ukufikelela kwiimvume zokusebenzisa izixhobo. Abasebenzisi abaziingcambu kwi-Android banokufikelela kulawulo lweengcambu apho inkqubo yokusebenza ifakwe khona. Oku ke kusivumela ukuba sisebenzise iifayile ezenziweyo ngokuthanda. Zininzi ke iinguqu ezinokwenziwa kule meko.
Ke ngoko, ukuba awuyongcambu, ngekhe ubenamathuba. Uya kuba nakho ukwenza ukusetyenziswa kwesiqhelo kwifowuni yakho ye-Android, ngaphandle kokufikelela kwezi fayile zikuvumela ukuba uguqule imiba ethile kwifowuni yakho ye-Android.
Ngaba kuyingozi ukuba unyothule iselfowuni?
Ukuqulunqa iselfowuni yakho yinto enokukunika izibonelelo ezininzi kunye nemisebenzi eyongezelelweyo. Nangona kukho uthotho lweengozi ezingenakuhoywa. Okokuqala, ukuba ufaka usetyenziso kwifowuni yakho, ziyacelwa ezinye iimvume, ukuze ukwazi ukuyifaka kwisixhobo.
Ukuba ungumsebenzisi wengcambu, unika usetyenziso ukufikelela kuzo zonke iifayile zenkqubo. Oku kuthatha ukuba usetyenziso alunamda wokusebenza kwaye banokufikelela kuyo yonke into. Into enokuba yingozi kakhulu, ngakumbi ukuba unesicelo esibi esifakelweyo. Kuba uya kuba nakho ukwenza yonke into oyifunayo kwisixhobo sethu.
Ngakolunye uhlangothi, inkqubo luzimisele Android nzima. Yiyo loo nto abasebenzisi abangenamava bengacetyiswa ukuba benze njalo. Kuba kulula ukwenza impazamo, enokuba neziphumo ezibulalayo kwisixhobo sethu. Kwakhona xa sele uyingcambu, kuya kufuneka ulumke kakhulu ngento oyifakayo, iimvume okanye iifayile oziphetheyo.
Ke ngoko, ingcambu yefowuni yakho ye-Android yinto ekufuneka icingwe kakuhle ngaphambi kokwenza. Ukusukela ukuba nangaliphi na ixesha uyazisola, nangona kunokwenzeka ukubuyisela umva inkqubo, akukho lula ukuyiphumeza.
Ngaba iwaranti isuswe yingcambu?
Mhlawumbi ngamanye amaxesha ukhe weva malunga nesi sihloko. Lo ngomnye wemicimbi entsonkothileyo xa kufikwa kwingcambu. Njengoko Ungalahla iwaranti yefowuni yakho ye-Android, kodwa ayiqinisekanga nge-100%. Ke ngoko ivelisa amathandabuzo amaninzi phakathi kwabathengi.
Kuyinyani ngenxalenye, kodwa ukuba uyazi imiyalelo ye-European Union, kunokwenzeka ukuba oku kuyayeka ukuba ngumqobo. Ukuba ungumhlali welizwe laseYurophu kwaye uthenge ifowuni kwelinye lala mazwe, imeko inzima. Yintoni egqithisile, ihlala ixhomekeke kumenzi ngamnye.
Nangona umkhwa kwiminyaka yakutshanje ibikukuba abavelisi baye bavumela kancinci kulo mbandela. Umzekelo, ukuba unengxaki kwifowuni ye-Samsung, into yokuqala abajonga kuyo ukuba uyingcambu okanye hayi. Ukuba kunjalo, ukulungiswa akuyi kuba phantsi kwewaranti. Into enokuba yindleko enkulu kumsebenzisi. Kodwa, nawuphi na umenzi uya kuba nakho ukufumanisa ngokulula ukuba uyingcambu.
Kodwa, njengoko besitshilo, kuxhomekeke kumenzi. Nangona ubungozi bokwenyani, ukuba xa unengcambu uya kuphulukana nesiqinisekiso. Ngelo xesha akukho mgaqo-nkqubo ucacileyo Ngale ndlela. Kwimeko yamathandabuzo, ungasoloko ujonga iwebhusayithi yomenzi, apho kuhlala kukho ulwazi malunga nayo.
Unako kwakhona fihla ingcambu Kwimeko apho nasiphi na isicelo sikunika iingxaki zokuba ungumsebenzisi ophezulu.
Ndenza ntoni ukuba emva kwengcambu kwi-Android andinakuyihlaziya?
Enye yeengxaki eziphambili esinokujongana nazo xa usenza ingcambu. Xa usenza oku kwifowuni yakho, izaziso zohlaziyo zihlala zinyamalala. Nangona ixhomekeke kakhulu kumenzi ngamnye. Ke ngoko, uhlaziyo lwe-OTA, ezizinto esiqhele ukuzifumana emnxebeni, siyeke ukufumana.
Oku kuyasinyanzela ukuba kufuneke sikhangele uhlaziyo ngokwethu. Sinamaphepha apho unokukhuphela khona olu hlaziyo ngesandla, kwifom ye-APK, umzekelo. Kodwa, oku kunokubangela iingozi ezininzi. Okokuqala, asazi ukuba luhlaziyo olukhuselekileyo njenge-Android. Kwakhona, ngokuyifaka, iya kuthi isuse isiseko esivela kwifowuni.
Ke ngoko, nje ukuba ufake uhlaziyo, kuya kufuneka uphinde unengcambu. Ke kuya kufuneka uphinde uyigqibe inkqubo kwakhona. Ke kule ngqondo kukho izinto ezimbalwa ezinokwenza kube nzima ukufumana uhlaziyo okanye ukuzifaka.
Iingcebiso zokugcina engqondweni ngaphambi kokuba uqhubeke
Ukuba uthathe isigqibo sokuncothula ifowuni yakho ye-Android, kukho izinto ezininzi ekufuneka uzithathele ingqalelo ngaphambi kokuqala inkqubo. Ngale ndlela, kwimeko apho uza kuqala inkqubo, awuyi kuba neengxaki ngexesha layo.
Ngaphambi kokuqala, Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ubuncinci une-60% yebhetri kwifowuni. Yinkqubo enokudla ixesha kunye nexesha. Ke ngoko, awunakuze uyenze ngebhetri esezantsi. Njengoko oku kunokubangela iingxaki okanye unganakho ukugqibezela.
Ukuba uza kuyingcambu ngekhompyuter, kungcono ukusebenzisa ilaptop. Kuba ngale ndlela awuxhomekekanga kwinto yangoku. Kwimeko apho ikhompyuter icimile, kuba umbane uyacima, unokubangela umonakalo ongenakulungiswa kwifowuni. Ke ngoko, ilaptop ikhuseleke ngakumbi kule meko.
Xa uyingcambu, idatha egcinwe kwifowuni ayicinywanga. Nokuba awunayo kwimemori yangaphakathi okanye kwi-SD. Ukuba ufuna ukwenza ikopi kulungile, kukhuseleko, kodwa azizukucinywa nangayiphi na indlela.
Ndiyisusa njani ingcambu
Ukuba ubungumsebenzisi wengcambu kwifowuni yakho ye-Android, kodwa awuboni zibonelelo kwaye ufuna ukuyibuyisela umva, sinethuba lokwenza njalo. Ngale ndlela, kukho amathuba amaninzi, axhomekeke kwinxalenye yeROM oyisebenzisileyo xa uxhasa ifowuni yakho.
Kukho iiROM ezikuvumela ukuba unroot ngokuthe ngqo. Banenqaku elikunceda uguqule utshintsho kwaye ubuyisele ifowuni kwimeko yayo yentsusa. Ngumsebenzi obizwa ngokuba yi-Unroot. Kodwa ayisiyonto esinayo ukuba sifumaneke kuzo zonke iiROM zesiko phaya.
Ukongeza koku, sinako ukusebenzisa ezinye iinkqubo. Abahloli befayile abanjengo-ES Explorer basinceda ekupheliseni iifolda zengcambu, ukuze kuthi xa sigqibile, xa uqala ifowuni, sibuyisele ifowuni kwimeko yayo yoqobo. Kukho enye insiza kwiVenkile yokudlala, ekuvumela ukuba uguqule ingcambu yazo zonke iifowuni. Ungayikhuphela apha
Ukuba oyifakileyo ayiniki le meko, ungayisusa ngesandla. Into ekufuneka uyenzile kukufaka kwakhona i-firmware yoqobo. Abanye abavelisi banika abasebenzisi izixhobo zokufaka kwakhona i-firmware ababenayo, ukuze ingcambu isuswe ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ingcambu Android » Indlela yokuqalisa i-Android
Izimvo ezi-183, shiya ezakho
cima ulwazi kwifowuni? I-nexus 5 yam nanini na xa kufuneka uyijikeleze kufuneka uyifomathile ... kwaye andifuni
Iposti ebalaseleyo. Ndikwazile ukuyisusa ngokumangalisayo ipro lite yam ngokumangalisayo kwimizuzu emi-2. Ndiyabulela kakhulu.
Usebenzise esiphi isicelo?
Ndiyitshintsha njani i-andrid ukuya kwi-Spanish kwigalaxi yam s4 ​​okoko ndahlaziya kwaye yonke into ibingesiNgesi
Ndijoyina umbuzo, ngaba ukhula kunye nale ndlela kubandakanya ukufomatha?
Le ndlela ayifomati okanye icime nayiphi na idatha.
kevin vargas sitsho
Molo mhlobo, ndinomnyele we-galaxy s2 t989 ose kwiselfowuni bathi iiherculeles… ucinga ukuba ungayisebenzisa le app ukutshintsha inguqulelo yam ye-androit. Ndilinde impendulo yakho
Phendula u-kevin vargas
Molo uFrancisco, ungandinceda ndithenge i-Samsung Galaxy Ace 4 kwaye kuvela ukuba ibiwe? Umntu othengise kum (owayesakuba ngumhlobo) akabhatali.
Ndiyenzile nje kwaye akukho fomathi ifunekayo.
Ngaba iyahambelana neNexus 4? Ngaba iwaranti ilahlekile ukuba yenziwe?
Ndinayo i-xperia s, ilungiselela ntoni? Ngaba ilungile isantya kunye nobude bebhetri?
Ukuba neqhosha elibomvu kunye nemfusa okanye i-violet enye, ufuna ukubhala «iqhosha elibomvu", xa imfusa ingathetha «Umbala obomvu ophakanyisiweyo otsala i-violet
kwi-XT890 okanye iRazr I, inye kuphela iqhosha lemfusa eliphuma ekugqibeleni. Kwaye ayinangcambu
UGiora omncinci sitsho
I-Deluxe, isebenza kakuhle kwithebhulethi ye-Samsung Tab 3.
Phendula Giora Minor
Molo uGiovanni, unayo i-ST-210 ene-Android 4.1.2? NdinguAndres waseArgentina. Enkosi!
wow isebenze ngokuchanekileyo enkosi kakhulu. Ndiyabulisa zihlobo.
UAdrian Grace sitsho
Nge-Nexus 7 2012 ayisebenzi 🙁
Phendula uAdrián Gracia
Ndisifumana njani isicelo solawulo lweengcambu zaseTshayina?
Ngenisa iVenkile yokudlala kwaye ufake iSuperSu
Kwenzeka into efanayo kum, emva kokujikeleza, ndafaka i-supersu kulwimi lwam, ndavula, ndahlaziya i-binaries kwaye yafakwa, emva kokuba ndigqibile ngayo yonke into ndaya kwimenyu ye-Android, useto, usetyenziso, jonga konke, jonga Ingcambu yaseTshayina kwaye uyikhubaze. Ukusuka apho i-supersu yaqala ukuphatha ingcambu. Andifumananga enye indlela
Isebenze kakuhle kum kwimini encinci yam ye-s3 kodwa ke ndenza ntoni ngayo?
Kwaye yeyiphi na isicelo esifanelekileyo sokuhambisa ii -apps kwisisele kuba ndizamile ngayo kwaye ayisebenzi ..
UFrancisco ulale kakuhle
Ndenze ufakelo lweengcambu master kwaye emva kokuba ndikwenzile, ndikhuphele usetyenziso olubizwa ngokuba nguFonti kukutshintsha unobumba womdibaniso, okwenzekileyo kukuba i-lg g2 yaziqalela kwakhona kwaye xa yayiqala ukunika umfanekiso-skrini ngomyalezo: wamkelekile ukucoca: ngokuphindaphindiweyo kwaye kuye kwafana nesiqingatha seyure. Ndiyicime kwaye ibuye ibuye kwaye umyalezo ofanayo uqhubeka nokuvela.
Ndikuxelela ukuba ndinexhala lemibuzo yam yile: Ukonakalisa inkqubo yakho yokusebenza? ulahlekelwe iwaranti? Ndiyibuyisela njani ebomini? NCEDA UNDINCEDE.
Khangela i-androidsis ngeposi ukuze ukhanyise umn umnini firmware wangaphambili kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi kwaye uya kuyiphinda uyiphinde.
Ndiyenzile kwisamsung yam ye-samsung ye-mega ekuthiwa ndiyayiphula kwaye umsebenzisi omkhulu waseTshayina uyaphuma kodwa ndikhuphele isitshixo sengcambu kwaye indixelela ukuba andiyongcambu. Ekuphela kwendlela endinokususa ngayo ingcambu yaseTshayina yayikukhuphela i-rom yam esemthethweni kunye nokudanyaza ngu odin kwelinye igama khange isebenze kwimodeli yam samsung galaxy mega 6.3 att
Ngaba unroot unokuba nesoftware efanayo?
INexus 5. I-Android 4.4.2. Khange isebenze
ULuri olete sitsho
Kuyafana apha, i-Nexus 5. I-Android 4.4.2. Khange isebenze
Phendula uLuri Olete
UAdolfo Quevedo sitsho
Ukuba iyandisebenzela kwi-lg g2 d805 yam eClaro Colombia kwaye sele ndizicimile izicelo esele zilayishwe ezithatha indawo kuphela.Ndiyabulela kuFrancisco ngalesi sifundo bendisele ndizamile ngezinye iindlela ngaphandle kwempumelelo
Phendula kuAdolfo Quevedo
UDahaka Dunkelheit sitsho
Isebenze kwitablet ye-noblex t7014 yokwenziwa kweArgentina ayisiyomnye ngaphandle kwethebhulethi yaseTshayina i-hisense sero 7 lite efihliweyo ... Ukuhluthwa kwezinto kwakulula, kwaye kwakungekho sidingo sokuyiqala kwakhona ithebhulethi ... Abo bathi bayathoba Umhloli wezingcambu kwaye ndibadubule ukuba ibingengabo Ingcambu, kufuneka ukuba bangene engxakini ngenxa yomphathi wengcambu waseTshayina, ngokuqinisekileyo xa ndibuza ukuba bafuna ukuvumela ukufikelela kwengcambu kwindawo yokukhangela ingcambu, kuba abaqondi IsiTshayina, badlale nantoni na kwaye bavimba usetyenziso ukuze bangene kwiingcambu, bakhokele ngemibala xa bengena isicelo solawulo lwesiTshayina, ukuba oonobumba baseTshayina babomvu, usetyenziso alunazo iimvume zengcambu, ke ndicebisa ukukhuphela iSupersu kwakamsinya nje uneengcambu, ulumke, isicelo samaTshayina siza kukuxwayisa ukuba iSupersu ifuna ukufikelela kweengcambu, jonga kakuhle apho ungachukumisa khona ukuze unike imvume, emva koko ukhubaze usetyenziso lwaseTshayina kuseto lwesicelo kwaye uvimbele iimvume zalo nge supersu kwimeko apho uza kuthi Yonke into ilandelelana .., kunye nothando di Musa ukukhuphela iifonti, kufuneka uqiniseke ukuba iROM iyabaxhasa ukuba into efanayo ayizukwenzeka kuwe njengomsebenzisi we-lg ... Enkosi kuphela kwendlela endisebenzeleyo
Phendula kuDahaka Dunkelheit
Kulungile ukulandela amanyathelo e-francisco kunye namabhunga akho ndiza kuyenza kwithebhulethi kuba ndinayo efanayo, ndingathanda ukwazi ukuba utshintsho olwenziweyo yile tube, ukuba unokukhuphela ezinye izicelo, ungazidlulisela ikhadi? Ndiyabulela kakhulu!!
Phendula u allan
Ingcuka elibhinqa sitsho
Kwi-Motorola, i-moto g ekugqibeleni iphuma kuphela kwiqhosha elimfusa. Kwaye ayinangcambu
Ayisebenzi kum kwiXperia z ndifumana iqhosha elimfusa ??????
Isebenze ngokugqibeleleyo kum: i-joi (i-Call 350); Kuphela xa ufaka iSuper Su yokuhlaziya i-binaries, indinika = herror. Kwelinye icala… xa ufaka i-Root Checker Basic… .SI indixelela ukuba ngoo-
Kwi-NoTE II ayisebenzi, ithi impazamo kukhuseleko olutsha lwe-Saumsung kunye neqhosha elimfusa liyavela ngubani owaziyo ukuba lithini hehehe
Emva kokuzama iindlela ezahlukeneyo ekugqibeleni omnye usebenze kakuhle kakhulu kwi-Lg 7 jelly bean, enkosi uFrancisco.
Ndine-asus memo pad fhd 10,1 ene-adroid 4.3 kwaye ayenzi nto kwaphela okanye ingcambu okanye yenze amanyathelo kodwa ayinangcambu
URamses Garcia sitsho
Isebenzile kum, kulula ngokukhawuleza kwaye kulula !! Ndihlala ndingathethi! Ndigcina okuhle okanye okubi! kodwa ngeli xesha bendifuna ukwaba ukuba iyasebenza kwi-LG pro Lite yam nakwabo bagqabaza ngombala omfusa, kum yayiyeyeyeleko lam ibomvu kwaye enye ngasekunene yayimfusa = emfusa !! hahaha sisiphelo kunye nenhlanhla!
Phendula uRamsés García
UAlexander De La Asuncion sitsho
Ndisandula ukuxhoma i-galaxy tab yeGT-P3113 kwaye yavela enkulu, andizukufomatha okanye ndicime nantoni na. Enkosi!!!!!
Phendula kuAlexander De La Asuncion
Khange isebenze kum kwimini encinci ye-s4
Ndiyayikhuphela, ndenza onke amanyathelo ngokuchanekileyo kodwa imibala emibini emfusa nobomvu ayiveli. Imfusa kuphela kwaye akukho nkqubela phambili. Umntu othile uncede mna?
Kukhetho lokugqibela ndifumana kuphela iqhosha elikhulu elimsobo hayi obomvu nokumfusa obonakala ekubanjweni.
Ifowuni yam yindumasi ye-Samsung ye-galaxy kwaye akukho nto yimbi andinakukwazi ukuyisusa ukuba ungandinceda ndingayixabisa kakhulu
Kulunge kakhulu kwi-daytona yam kodwa ndiyacima i-ap
iyasebenza kwi samsung s4 mini ??
Wayeneminyaka elishumi !! Ekuphela kwento endingayaziyo yindlela yokukhubaza usetyenziso lokusebenzisa supersu. Ndine-Android 4.1.1 kwaye ayindiniki ukhetho lokukhubaza. Ukuba ungandinceda ngaloo nto, kuya kuba kuhle.
Umntu othi ndibize i-350 ufuna ikopi yazo zonke iifayile ezikwifolda ye-APP ukuze ayifumane, kuya kufuneka uye kwimemori yangaphakathi yeselfowuni kunye nenkqubo ye-SYSTEM / APP kukuba ndicime iifayile ezininzi kwaye andiyenzi ' khumbula ukuba zeziphi endizicimayo kwaye indinika iimpazamo ezininzi, nceda ukuba umntu othile undenza ikopi yolawulo lwakho, imeyile yam pjuanjo_1@hotmail.com
Nceda uyifakele ndiyenzile inkqubo kodwa ekugqibeleni ayibonisi ngaphezulu kweqhosha elimfusa hayi elibomvu kwaye ukusuka apho akwenzeki ..
I-santiago marcos soria preiti sitsho
Ekugqibeleni ndiyikhuphile inkosi kwaye eyona super yayibaleka ishumi. Ukujonga ingcambu kundixelela ukuba ibekiwe. Ndikhuphele i-greenifie ebeka usetyenziso kwii-hibernation kwaye ngoku i-alcatel yam ekuchukumiseni isithixo isebenza kakuhle. Ndiyabulela kakhulu. Khange indikhuthaze ukuba ndiyisuse. Qaphela ukuba uFrancisco uxwayisa ukuba ayizizo zonke iiselfowuni ezisisiseko ngale nkqubo. Imibuliso evela eArgentina.
Phendula kwi-santiago marcos soria preiti
Ngaba iyahambelana nesony sp yam?
Insiza yandikhonza ngokugqibeleleyo, ndinayo i-Samsung S4 kwaye umbuzo wam ngulo, emva kokubuyisa ifowuni, ngaba ndingasusa usetyenziso?
Ndigxile i-xperia L kwaye kumnandi… .kodwa kwiminyele s3 mini kukho kuphela iqhosha elimfusa… .. leliphi inyathelo elilandelayo?…
Ndinemoto g ndiyifakile, ndalandela amanyathelo kwaza kwavela iqhosha elimfusa, ndacofa kwaye kubonakala oonobumba besiTshayina kodwa ifunda i-sdcard kunye nengcambu .. Kwaye ndisebenzise isihloli seengcambu kwaye siyandixelela ukuba andiyongcambu . njengam?
Andikwazi ukuhlaziya isixhobo Samsung galaxy s III mini ndingayikhupha njani le nkqubo enkosi
UCarlo Coello sitsho
I-XPERIA Z Ultra, ndilandele amanyathelo kwaye ekugqibeleni ndibona kuphela iqhosha elinombala omfusa, hayi omfusa kunye nobomvu, ndakhangela ukuba ayizinzanga na kwaye ayisebenzi. Ngaba ukhona umntu owaziyo ngenye indlela?
Phendula uCarlo Coello
xa ungumsebenzisi wengcambu awukwazi ukuyihlaziya yenye yezinto ezingalunganga onokuzihlaziya kuphela ngokuzikhuphela kwaye usebenzise i-pc
Molo isebenza nge-pocket galaxy kunye ne-4.0.4
Molo, ndiyabona ukuba into efanayo iyenzeka kuninzi lwabo njengakwisinyathelo sokugqibela, kubonakala kuphela iqhosha elinombala omfusa othi xa ucofiwe ungenzi nto ... ... kwaye ingcambu ayisebenzi ... nasiphi isisombululo? Ndinodumo lomnyele. Ndiyabulela kakhulu.
Indlela yokuqalisa i-Galaxy s4 mini nge-Android 4.2
imibulelo emininzi isebenze ngokugqibeleleyo kum kwi-alcatel touch yam enye, pop (520),
Ndizamile ngezinye iindlela kwaye khange zisebenzele mna, kodwa eyakho isebenze ngokugqibeleleyo kum
Molweni zihlobo, kulungile
Na kwi-s4mini ayinikezi, ekugqibeleni kukho amaqhosha ama-2
Khange isebenze kum kwi-galaxy ace, ekugqibeleni ndifumana kuphela iqhosha elide elimfusa
Konke kuxoka ..... manga de boludos al fado
Ndiyakuqinisekisa ukuba khange ndiyenze, kuba ndiyenzile kwiselfowuni yam. Ndijongile kwaye ndisebenzisa iiapps ezifuna isuperer.
Hee mfondini, iyasebenzela i-lg l9 ene-Android 4.0?
Inkqubo yam yokususa kunye nokuhambisa ii-sd izicelo kwaye yandicela ukuba ndibambe ongezantsi xa ndisenza inyathelo ngenyathelo lisebenze kakuhle kwaye ngoku ndinokukhupha usetyenziso lomqhubi weselula kwi-Xperia yam endijongileyo
Hee, ndifakela enye into engaphezulu kwaye endiyinikwa sisicelo ayindivumeli ndiyisebenzise .. ndingenza ntoni?
Ndenze yonke into oyifakileyo kwaye bendifuna ukukhangela ukuba sele ndinaso na isixhobo esineengcambu zokujonga kodwa ithi "Ndicela uxolo" Esi sixhobo asinakho ukufikelela kumendo ofanelekileyo.
Ungandixelela ukuba ndenze ntoni?
Ndinecwecwe leacer iconia B1-A71 uguqulelo 4.2.1
Umntu othile uzame kwi-xperia m (c1904) ... Ndingathanda ukwazi ukuba iyasebenza kuloo modeli
Ndinayo le modeli kodwa andinabuganga bokuyiphula
omnye umbuzo kutheni ukhutshelwa kwifomathi ye-ExE?
Ndisebenza kwi-Samsung galaxy pocket neo thanks ekugqibeleni ndiyingcambu enkosi bhuti
Inqaku alisebenzi kudumo lomnyele we-Samsung okanye u-x phería uzame kunye nabantakwethu kwaye akukho nto
Molo… igama lam ndinguBrian… Ndingathanda ukucela uncedo lwakho… umba kukuba ndibenengxaki ngale app kwaye kukuba xa ndiyifakileyo, andikhange ndiyisuse i-s4 yam kuphela, kodwa ndakuba ndiyifakile kwaye ndithe ndakuqonda ukuba ayisebenzi ndafuna ukuyikhupha kodwa andinakuyenza ... bendifuna ukukubuza ukuba kutheni ndingenakuyenza le nto kwaye ndingayenza njani ukuyikhupha kwisixhobo sam ... Ndicela uthembe ukuba ungandinceda ..!
Molo ... igama lam ndinguBrian ... bendifuna ukucela uncedo lwakho ... umba kukuba ndibenengxaki ngale app kwaye kukuba xa uyifaka ayikhange nje ndiyisuse i-s4 yam kodwa kanye ndiyifakile kwaye xa ndiqonda ukuba ayisebenzi bendifuna ukuyikhupha kodwa andikwazi ukuyenza… bendifuna ukukubuza ukuba kutheni ndingakwazi ukuyenza lento kwaye ndingayenza njani ukuyikhupha kwisixhobo sam… ndicela uthembe ingandinceda ..!
NgeAlcatel One touch 918-D yam ndifumana ibha emfusa ende, kodwa akukho bomvu kwaye ayenzi enye into. Ndiyinika kwaye akukho nto. Ndifumana oonobumba xa ndiyicofa. Kubi kakhulu, ndiza kuzama ezinye iindlela
Rekhoda aq ukuba awukho Android 4 ukubheka phambili, le app ayizukusebenza kwi-alcatel yakho.
UFlorentino obando sitsho
Ndingalikhuphela kweliphi iphepha
Phendula u-Florentino obando
>. <ayisebenzi kwi-HTC VIVID ifomatha kuphela iseli
NGOKUGQWESILEYO! Amawakawaka ENKOSI!
Kwi-lg L7x yam khange isebenze, kuphume iqhosha elimfusa kuphela kwaye alikhange liqande
UKapteni Whipala sitsho
Che francisco ayisebenzi ... ndenze yonke into njengoko injalo ... fakela inkqubo ... yonke into ilandela ngokwemiyalelo kude kube sekupheleni. kodwa umhloli weengcambu undixelela ukuba andingcambu
kwaye supersu ayibonakali nakum. Ndinomnyele we-s3.
Phendula uKapteni Whipala
Khangela kwi-Androidsis "Ungayingcambu njani i-Samsung Galaxy S3" ukuba unesifundo esithile sokufumana ingcambu.
ine-virust yokuba ifayile ye-apk dsd i-pc m ethintela i-antivirus
Khuphela i-APK simahla sitsho
Enkosi corduroy, undincede kakhulu ngokujikeleza.
Phendula kuKhuphelo lwasimahla lwe-APK
UCarlos Lopez sitsho
Ndinenova andazi ukuba ungangena nengcambu
Phendula u-carlos lopez
Umsebenzi kwi lenovo s960t
Juvenal Tarqui sitsho
Ukuba i-super Su ithi ayimiliswanga, kungenxa yokuba ayiyiyo. Zimbini iintlobo zengcambu enye ingcambu yomsebenzisi kunye nomnye umsebenzisi ongumqali ...
Phendula kwiJuvenal tarqui
xa ucima kwaye uphuma ngaphandle kwengcambu
Ngaba inokuba kwi-motorola d1?
i-Xperia Go ayinakwenzeka kwiNgcambu sele ndizamile yonke into 🙁
Phendula ku danieldgtldaniel
Ndisebenzise i-samsumg s3 yamazwe aphesheya (i9300) kwaye khange ndiyibambe, bendifumana ibha emfusa kuphela kwaye akukho nto iphumayo, sebenzisa i-checke yeerobhothi kwaye indixelela ukuba ayimiliswanga njengam
Ungabaphendula abo bafumana kuphela iqhosha eli-purple ekugqibeleni? ENKOSI
Amaninzi sele ekubuzile kwaye awuphendulanga namnye umntu ngalo mbandela.
Ewe ndiyakwazi ukuphendula, kulula nje ngokuba usetyenziso aluhambelani nezi terminals.
Malunga nomhlobo wam.
Uxolo ngesisele sam kunye ne-Samsung Galaxy Mega GT-I9152 kwaye le app ayisebenzi kum, ngaba umntu angandinceda ndiyincothule isisele sam nceda ... enye into kukuba umntu uyakwazi ukuyiguqula ibe yi-4G, ndicela undincede .
Oku akuzange kundisebenzele, iseli yam yinguqulelo ye-Android engu-4.3 kwaye kukho iqhosha elinye elimfusa kuphela ngesiTshayina elinelizwi phakathi, kukho enye indlela yokwenza ngaphandle kwe-framaroot kwaye ngaphandle kokusebenzisa i-pc?
UPablo Lopez sitsho
UMario ndine-M4TEL ss1090 kwaye isebenze kakuhle kum
Phendula Pablo Lopez
UFrancisco Javier sitsho
Kwaye i-Samsung galaxy s ezintathu mini
Phendula uFrancisco javier
ungayiphula ingcambu i-gova e-orenji?
Josimar garcia sitsho
Ndinayo ifowuni yeselfowuni, enokuthi yenziwe njani kwaye ndizame ngeenkqubo ezininzi kodwa akukho nto yenzekayo
Phendula josimar garcia
UJorge Monsivais sitsho
Ungathini, ndingathanda ukwazi ukuba ungayincothula imodeli ye-motorola X XT1058, ndingavuya ukuba ungandiphendula, kuba andikukhuthazi ukuyisusa, kuba yathatha ingcambu ukubuyisa ezinye iifayile endizicime ngempazamo, emva koko ungayikhupha unroot?
Phendula Jorge Monsivais
I-pantech yam yokufumanisa ayifuni ukuvula i-wifi emva kokubuyisela i-backup kunye ne-Wifi password Recovery ... ndiyifaka njani i-OS kwakhona kwiingcambu?
Ungabuyela njani kwimeko yomzi-mveliso kunye nenkosi yenkosi enkosi
Molo: ndingasusa njani iapk yamaTshayina ndiyibuyisele ngeSuperSu? Ngokuzenzekelayo iimvume zivela ngesiTshayina. Kwaye andiqondi ukuba ndimele ukumakisha phi. Ndifuna impendulo engxamisekileyo nceda.
Ngokukhawuleza emva kokukhuphela iSuperSu okanye iSuperUser kwiVenkile yokudlala, iya kukubuza ukuba uyafuna na ukukhipha isiTshayina.
Molo: Ndinemini encinci yeGPS SIII kwaye ihambe kakuhle, ukhula lwenkohlakalo lwalungenangxaki kodwa xa ndifuna ukusebenzisa i-superSU ayindivumeli, kuba isicelo samaTshayina ngokungagqibeki asindivumeli. Ndifuna impendulo engxamisekileyo nceda. Owu ... kwaye abo bane-RARZ D1 ngebhayisekile bayingcambu ngaphandle kwengxaki neframaroot.
Olunye ukhetho onalo kukungena kwindlela / idatha / usetyenziso okanye / Inkqubo / usetyenziso kwaye ujonge i-apk yesicelo seTshayina, oko kukuthi, iSuperUser yaseTshayina kwaye uyicime nayo nayiphi na ifayile yokuhlola. Emva koko uqala kwakhona kwaye ufake iSuperuser okanye iSuperSu kwaye yiyo loo nto.
Pablo Alvarez umfanekiso obambe indawo sitsho
Ungathini ngabahlobo, ndifumana kuphela iscreen esimfusa kwaye ndakhangela isitshixo sengcambu ukuba ndiyingcambu kwaye ithi hayi, ndenza ntoni? Ndine-IBS encinci
Phendula Pablo Alvarez
Molo ndine-Sony L kwaye ndingathanda ukuyisusa. Ukuba ndisebenzisa isicelo osinike sona ... ingaba kulungile? Ngoba andifuni ukujija iphone yam. Enkosi ukubulisa
Andiyivuli i-galaxy note 2 i317m yentsimbi kunye ne-famroot ndifumana i-gandalf kuphela
Mva kwemini, mandikuxelele okwenzekileyo kum xa ndifumana le nkqubo nge-lg g2 enekiti kat 4.4.2, kwaye ukuba besele ndiyazi ukuba bekunganyanzelekanga ukuba ndiyizame, ndiyifakile ndagxotha, ndizamile inkqubo efuna ingcambu ch2 okanye into efanayo, Ukuguqula amaxabiso kwimidlalo, kwaye iyasebenza, xa ndiyivula ifowuni, khange iphinde isebenze, ndiyifakile kwakhona, indixelele ukuba isitshixo seengcambu yingcambu, okanye into. ngokufanayo kwakubizwa njalo, ndafaka i-super su kwaye ayisasebenzi kum ingcambu, ndiyikhupha yonke into ndaphinda ndafaka isiTshayina, kwakhona ndiyingcambu, ndikhawulezisa ukufaka oko bendikudinga, inkqubo yokukopa kunye nokugcina yonke i-wi yam. fi passwords (ingcambu kuphela) kwaye iyandisebenzela, kodwa ibaleke ishiya ingenanto, yonke into ibhuqiwe apha, le nkqubo indicela ukuba ndiyicime kwakhona i-wifi, ngaphambi kokuba ndibe yingcambu ngo-4.2 ayizange indibuze kodwa ndiyinike Kulungile, ukusukela ngala mzuzu ndiyigcinile i-wi fi ebharini, ngokungathi ndifuna ukuvula, kodwa ngaphandle kokuvula ngokuqinisekileyo, njengaxa siyicima kwaye siqhubeka, kodwa phakathi kwendlela. Ndiyiqala kwakhona ifowuni, iyafana. Khange ndibenakho ukhetho lokuseta kwakhona kanzima, ndilahlekelwe yiyo yonke into, kwaye ndothuka, ibisafana emva kokusetha nzima, apho bendinexhala okoko ndaphinda ndamisa amaxesha ama-2 kwaye akukho nto, ndiphantse ndaya kwinkonzo yezobuchwephesha, kodwa kwi end kwaye njengokhetho lokugqibela ndizamile kwi-pc Nge-pc suite yokufaka kwakhona ikiti kat 442, ayizukundivumela, ndide ndibone ukhetho lokulungisa uhlaziyo olubi (yabizwa into efanayo, ukhetho andilwenzi khumbula kanye) ndiyenzile kwaye yathatha ixesha elide xa ndihlaziya ikhithi 442, ndigqibile ndenza enye into enzima kwaye ndalungiswa.
Ndiyayixela xa umntu eza kuba nengxaki efanayo, kwaye umbuzo wam wobuhlakani bukaFrancisco kukuba ucinga ukuba inokwenzeka, ingayingcambu embi okanye yayiyinkqubo yephasiwedi, kwaye kutheni ukuseta kwakhona kunzima ayilungisi kwaye kuye kwafuneka iphinde ifake i-kk442 ukuyilungisa? Enkosi ngokufunda kunye nemibuliso ukusuka eArgentina ukuya kuFrancisco nakubo bonke abantu
Ndingayityhila njani nceda?
UAndy Moreno sitsho
Kakhulu. Enkosi, yonke into yagqwesa.
Phendula u-Andy Moreno
Ngaba uyazi ukuba iyasebenza ngePrimux Zeta?
eyona nto intle kukuba uyizame kwaye usixelele.
UAntonia Belén sitsho
Ngaba iyasebenza kwi-lg l3 yam? 🙂
Phendula u-Antonia Belén
Ndiyikhupha njani i-samsung galaxy s4-mini gt-19190 jelly bean 4.2.2?
Andazi ukuba kuzokwenzekani, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo le nkqubo yandisebenzela njengoko kubonisiwe kwizikrini, kwaye umhloli weengcambu uqinisekisile ukuba sele ndiyingcambu, kodwa ngoku ndiye ndabona ukuba andisengcambu, ndazama ukusebenzisa Isicelo kwakhona, kwaye kanjani Kwabaninzi, ndibona kuphela iqhosha elikhulu elimsobo, ukongeza kuloo ukuba ndicofa kuyo, ndifumana umyalezo ongenakuwuqhagamshela apho andazi ukuba uphi. Kwakulungile ngelixa lihlala.
UJorge Coral sitsho
Uvavanywe kwi-QBEX QBA769, usebenza ngokufanelekileyo. Unobuhlobo kakhulu.
Phendula Jorge Coral
URodrigo Caballero sitsho
Ndibona iwindow encinci eneqhosha elinye elimsobo kwaye ithi ingcambu njengamaxesha ama-4, kuthetha ntoni?
Phendula uRodrigo Caballero
Uvavanywe ngempumelelo kwi-Bogo QC yokuba i-Framaroot ayiphumelelanga; Ndifumana ii icon ezimbini, enye ifunda iNgcambu, le ndinayo "efriziwe" kunye neTitanun kwaye kubonakala ngathi imiyalezo yeSU ayisabonakali ngesiTshayina. Elinye i icon linokumiswa ngumkhenkce okanye likhutshwe okanye ngaba kuyafuneka ukuba uqhubeke umile?
l kunye nezinye sitsho
Ndicinga ukuba le post sele inexesha elithile, kodwa ayonzakalisi, buza
Ndine-xperia t2 ye-ultra kwaye ine-JB, kodwa ndihlaziye kwi-Kitkat 4.4.3.
Ngaba ungangena neengcambu ngale apk?
Inenekazi ndifumana iqhosha elimfusa, kukho enye usetyenziso ukuyisusa i-htc yeselula
Kwaye ukuba ndine-Android 4.4 🙁
UElias Hernandez sitsho
Molo, ndiyathemba kwaye uza kundiphendula ngokukhawuleza kwabaninzi, isebenze kwimini encinci ye-s3 kodwa ndafumana nje iqhosha elibomvu kwaye hayi elibomvu, i-android yam yile ithi iyahambelana kodwa ngesizathu esithile ayisebenzi kwaye Andizange ndizinze kwiseli ukuba ndingayamkeli, kungenxa yantoni?
Phendula kuElias Hernandez
IManrique nerio sitsho
Molo uFrancisco Ruiz la Verdad Viejo, isifundo sakho sandinceda kakhulu !! Enkosi kakhulu bendinengxaki yokwakha.prop iifayile kwaye khange ivumeleke ukuba ingcambu Kodwa enkosi kwisifundo sakho ingcambu sele yenziwe kwaye ndinokuzilungisa iifayile ezazingalunganga ngaphambi kokuba Ndiyabulela indoda endala inyamekele kunye neentsikelelo!
Phendula uManrique Nerio
Inguqulelo yefowuni yam eyi-4.4.2
Ngaba ingasebenza ukuyincothula?
Molo, sele ndiwafumene onke amanyathelo, nditsho neqhosha elimfusa, kodwa xa ndizama ukusebenzisa usetyenziso lwescreenshot kubonakala ukuba ayizinzanga, ndingenza ntoni?
Edwin lopez sitsho
Nceda uyivuselele i-alcatel D1 bangandinceda kakhulu kuba kutsha nje andifumani nto ukuyisusa
Phendula uEdwin Lopez
Nje ukuba kufakwe iSuperSu indixelela ukuba kufuneka ndihlaziye i-binaries, kodwa sele ithathe isiqingatha seyure. Ndingenza ntoni?
umntu ofuna impendulo sitsho
Kutheni le nto kuvela iqhosha elibomvu emfusa hayi elibomvu?
Inguqulelo ye-Android 4.3
Phendula umntu ongxamisekileyo ukufumana impendulo
UYesu Mendez Ledezma sitsho
Iqhosha elimfusa kukuba isixhobo sakho asihambelani….
Phendula kuYesu Mendez Ledezma
Ndinefowuni yaseTshayina ene-Android 4.1 kwaye isicelo sisebenza ngokugqibeleleyo, iposti elungileyo kakhulu.
NguYesu Manuel sitsho
Mholweni: ndinetafile (eyentombi yam), apho kuvela igama elithi "ANDROID" kuphela. ukuba uyayishiya, injalo de ibhetri iphele. Kwenzekani.
Ukuba umntu undiphendula, ndingavuya kakhulu
Phendula Jesús Manuel
Molweni bantu, nditsiba malunga neqhosha elikhulu elimsobo kwaye iselfowuni yam yi-SGS3 ye-Android jelly bean 4.3 Ndifuna ukuba luhlobo oluhambelanayo ngokwale nkqubo ke ukuba kukho nabani na kuni owaziyo isisombululo okanye afumane into apho, ndazise pls pls i-gmail yam ndiza kuyeka apha ^ ^ borjalb98@gmail.com
12085151mlili + sitsho
molo, uyazi ukuba ususa njani ii -apps kwi-32gb sd ngaphandle kwesidingo seengcambu? Ndizamile amawaka eeapps kodwa azisebenzi. Kwaye ukuba bekuyimfuneko ukuba yingcambu kamva, ndihambisa njani ii -apps kwi-sd? Enkosi
Phendula ku-12085151mlili +
ungazisusa i-lg g3 yesicelo
uAbraham omncinci sitsho
Kwi-s4 yam ayisebenzi ndifumana iqhosha elinye elimfusa elincedayo
Phendula uAbraham osemncinci
Molo uFrancisco, andifumani robhothi indisebenzelayo ngefnac 10 tablet 🙁 yam
Ngaba uyazi nayiphi na into enokuba luncedo kum? Enkosi.
Molo, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ikati B15 inokugxilwa kule ndlela? Andikwazi kufumana ulwazi malunga nale terminal kwi-intanethi kwaye iza ilayishwe zizicelo ezininzi ezithatha kuphela izithuba.
Iya kudibana ne-CEL EXPERIA ZL C6502 resp.
Zama kwaye usixelele.
Masithi xa sihanjiswe ngokugqibeleleyo, .. kodwa kuthekani ukuba kamva ndifuna ukuqala kwakhona ifowuni yam kwimowudi yefektri, kunokwenzeka? Ngaba iya kuqhubeka nokuhanjiswa okanye ngaba ulungelelwaniso luyanyamalala?
Ukuba uyayicwangcisa kwakhona, ukusetha kwakhona kuhlala; intsha, kuya kufuneka uyingcambu kwakhona.
Molo mhlobo, ndinomkhwa we-galaxy trend lite GT S7390L, ndiyenzile yonke le nkqubo kwaye ayisebenzi, ndiyacinga, inyathelo lokugqibela aliphumanga njengoko lingentla, inguqulelo ye-Android ingu-4.1.2, nakwi end ndifumana esinye isikrini ngeqhosha elinye elimfusa kwaye ayifaki supersu okanye into efanayo, nceda uncede ungathandabuzi, enkosi: P.
Molo uFrancisco umbuzo wam ulandelayo ndinayo i-LG 7X ene-android 4.4..2 ingabangelwa?
ujan sebastian gaviria sitsho
Ngaba i-samsung galaxi star gt-s5282 ingagxothwa?
Phendula u-juan sebastian gaviria
UYesu c sitsho
Iyahambelana ne-motorola moto e kunye nohlobo lwe-Android olungu-4.4.4 ndilindele impendulo yakho
Phendula uYesu c
UJohan sebastian sitsho
Phendula uJohan sebastian
Mfusa ubomvu okanye mfusa
USamsun S3, ndilandele amanyathelo kwaye ekugqibeleni ndibona kuphela iqhosha elimfusa, hayi elimfusa kunye nelibomvu, ndakhangela ukuba lincothulwe kwaye alisebenzi. Uncedo oluthile?
Ndihlala ndinenkosi yengcambu kwaye xa ndivula iileta zaseTshayina ziyavela
uYesu garcia sitsho
Sele ndizamile amaxesha ama-5 kwimini encinci ye-s3 kwaye xa ndigqibile kuvela enye iwindow kwaye ayisuswanga, ndavala ingcambu yenkosi kwaye ndangena kwisikhangeli seengcambu kwaye indixelela ukuba ayimiliswanga.
Phendula kuYesu garcia
Ndenza ntoni ukuze ndiyincothule i-S Galaxy Young
Kusasa, ithebhulethi ye-Samsung galaxy tab-2 10.1 ingcambu ngaphandle kweengxaki. I-Android 4.2.2 Enkosi kakhulu
Ikhonkco lokukhuphela ingcambu ngumgibe wokufa
ULuis Sergio sitsho
Ngaba iyasebenza kum samsung galaxy s4 mini 4.4.2?
Phendula uLuis sergio
UmKristu Perez Perera sitsho
Kwi-master master link scam ecocekileyo
Ifaka i-booster yefowuni kwaye akukho mpumlo ukuyikhupha.
Enkosi ndoda, enkosi kakhulu….
Phendula U-Christian Perez Perera
Indlela yokucothula i-SuperSonic SC-91JB tablet
IZINXIBO 08 sitsho
Molo, ndizamile i-rotmaster kwaye iziphumo ziyafana ne-kingrot, ayisebenzi, ndiyivavanye kwi-galaxy s4 ene-Android 4.4.2, kunye ne-huawei nge-mui 3.0, kwaye ayisebenzi nakwezinye zazo, nceda Ngaphambi kokufaka into, jonga ukuba zeziphi izixhobo ezihambelanayo, ndigcina umbono wam wokuba ekuphela kwendlela yokujikeleza iselfowuni yile yendabuko nge-pc, nantoni na abayithethayo kumagqabantshintshi kumaphepha amaninzi e-intanethi kunye neeforamu, mna khange ndikwazi ukujikeleza nasiphi na iselfowuni nge-apk efakwe kwisixhobo, ihlala ihamba nge-pc, kwaye nabani na ofumene into yokundixelela ukuba bayenze njani kwaye yeyiphi imodeli yeselfowuni, imodeli kunye ne-android, ndiyathemba isisombululo, andiphumelelanga ...
iselfowuni yam yialps s850c kwaye akukho ndlela yokuya kwingcambu ndizamile zonke iindlela ezikhoyo kwaye akukho nto-- UNCEDO!
Ujikeleza njani ithebhulethi
UMaria Eugenia Hernandez sitsho
Isebenza kunye ne-alcatel touch yam enye 4033A
Phendula uMaria Eugenia Hernandez
alan alonso sitsho
NGABA YI-S3 LTE?
Phendula alan alonso
Ingelosi uPerez sitsho
ukuya kwi-ROPA08, kwi-funker s454 nakwipilisi ye-bravus 950, samnsumg s2, ongakwaziyo okanye ongayaziyo akuthethi ukuba abanye abayenzi, andinalwazi malunga nobunzululwazi bekhompyuter, umnxeba kwaye ndizuze inkitha yezinto, Awunokwazi ukuba awuyenzi kakuhle, apha ngasentla ndifunde enye engakwaziyo ukwahlula phakathi kokubomvu nemfusa ... ugqirha wamehlo lukhetho.
Ndine-Samsung S2 ene-Loolypop 5.1.1. Ihamba ngokungathi kukudubula, ibhetri yam ihlala phakathi kwe-16 kunye neeyure ezingama-22 ngokomndilili, ndiyinika umgaqo.
Kwaye konke ukubulela kwaba bantu basebenzela abantu abangamavila njengam abasebenzisa umsebenzi wabo.
ENKOSI KWEZO ZOKUPHEKA, ABASEBENZI BABASEBENZI BASimahla.
Phendula u-Angel Perez
U-Edison J. Romo R. sitsho
Ayisebenzi, isikrini sokugqibela seNgcambu Master asibonakali kwaye enye iyavela kwi-Samsung Galaxy S4 I9500 yam.
Phendula ku-Edison J. Romo R.
Molo mhlobo, shiya usetyenziso olufakelweyo kwaye xa uyisusa ingcambu iyasuswa, uyazi ukuba ndingenza njani ukuyisusa ngaphandle kokususa ingcambu? Kwenzeka ntoni ukuba ifana ne-super su kodwa ngesiTshayina kwaye andazi ukuba ingatshintshwa na okanye ukuba kukho inguqulelo yesiNgesi kungangcono. Nceda uncede. Iyandisebenzela kwi-xperia s kodwa andiyifuni loo app kwaye andazi ukuba ikhona indlela yokuyicima ngaphandle kokuchaphazela iingcambu
Andikhupheli usetyenziso lwe-fucking
Enkosi kakhulu, ulwazi olugqwesileyo, ndikwazile ukuyisusa ngokukhawuleza ithebhulethi yam yeAIKUM AT792HC.
Crisgame: 3 sitsho
Ayikwazi kuyingcambu i-samsung galaxy tab 3 (smt210) yi-Android 4.4.2.
Sisiphi isicelo endinokusisebenzisa ???
Nceda ndiyidinge ukuze utyhafe umdlalo kwaye ukuba undincedile ukuba ndenze lomdlalo ngu: AVATAR MUSIK ungayikhuphela kwivenkile yokudlala ☺.
Ndicela ukuba kwiselfowni yam enesistim ndisebenzise le ndlela yokuqhekeza kodwa akukho nanye ebendisebenzela? .
Nceda uncede, ndiyakucela ...?
Phendula kwiCrisgame: 3
Molweni ZIHLOBO NDIFUNA UKUBUZA UKUBA NINGANDIXELELA NENZA NJANI NGENXA YAM SAMSUNG GALAXI TRED LITE
Phendula u Enzo
IiAgoos Campos sitsho
Yintoni i-icon Master Master? Kuba uninzi lubonakala kum
Phendula kwiAgoos Campos
Sawubona uFrank, ubusuku obuhle ndiyathemba nje ukuba ungandinceda ... umyeni wam uyandifundela yonke imiyalezo yam kunye ne-watsap esuka kwesinye isixhobo okanye i-pc, yonke into ibonisa ukuba unengcambu okanye enye into ke undijongile ukuba ndingayisusa njani kwaye Andisayi kuba nayo iselfowuni yam ndicela undincede oku kuyakhathaza ... enkosi ukuba uphilile
san pateste sitsho
tshintsha iselfowuni yakho kwaye uhambe
Phendula san pateste
Akukho nanye kwezi zicelo engenamsebenzi! (benza inkathazo kuphela)
Phendula ku 1234asd56789
molo francisco jonga ndinomnxeba we-samsung we-grand prime sm-g531f x nceda ungandinceda ukuba ndingayincothula njani x nceda
molo francisco jonga ndinomnxeba we-samsung omkhulu we-prime sm-g531f x nceda ungandinceda ukuba ndingayincothula njani x nceda
Ndifumana loo nto yokukhuphela kufuneka ndibeke ifowuni yam kwaye andifuni kwaye ukuba kungenjalo ayizukundivumela ukuba ndikhuphele !!! Into endiyenzayo?
Akukho ndlela ndinokuthi ndiyincothule kwi-Samsung Galaxy Trend 2 Lite.. Ndizamile phantse ngeendlela eziliwaka kwaye akukho nto..ukuba umntu uthe mandiphume ndiye kuye
Amathafa aseDayan sitsho
Kulungile ngeli xesha ndingathanda ukukubuza uncedo njengoko ndinokuyiphula i-Samsung S7 yam ngaphandle kokusebenzisa i-pc yam i-S7 yi-Android 7.0 kwaye ndizamile iingcambu ezininzi kodwa andinakukunceda nceda ubulele kwangaphambili ...
Phendula uDayan Llanos
NdineHuawei Y6 II ene-adroid 6.0, ndizamile iindlela ezininzi kwaye bandixelela ukuba yomelele kakhulu kwingcambu
U-Alejandro coila sitsho
Molo, i-lg x max yam ayihanjiswa kwaye ndingayenza njani?
Phendula u-Alejandro coila
Hlanganisa iMon, i-RPG ye-puzzle engenzi nto apho kufuneka udibanise izilwanyana zakho ukudala amandla amakhulu
Samurai Kazuya, i-samurai RPG nqakraza kunye nesimbo esihle sokubonakalayo